Lego 71031 Marvel စတူဒီယို Collectible Minifigures သည်ပြန်လာသည့် X-Men ဇာတ်ကောင်ကိုလှောင်ပြောင်သည်
26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 362 Views စာ0မှတ်ချက် 6866 Wolverine ရဲ့ Chopper Showdown, 71031 Marvel စတူဒီယို, အဆိုပါ Sentinel vs. 76022 X-Men, 76073 Mighty Micros: Wolverine နှင့် Magneto, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, Wolverine, X-Men
များအတွက်ထုပ်ပိုး အသစ် - ထုတ်ဖော် 71031 Marvel စတူဒီယို စုဆောင်းထားသောအသေးစား တစ် ဦး ၏ပြန်လာ teases classic Lego X-Men ဇာတ်ကောင်။
box ကိုဖွင့်လှစ်စတိုင်အောက်ပါ art ဒီနွေရာသီရဲ့ Infinity Saga လှိုင်းအတွက်, စီးရီးအသစ်များအတွက်အိတ်ဒီဇိုင်း စုဆောင်းထားသောအသေးစား အနက်နှင့်အဖြူပါရှိသည် Lego Thor, Captain အပါအဝင်ရုပ်ပြစာအုပ်ဇာတ်ကောင်များ Marvel နှင့် Spider-Man.
သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်သင်တန်း၏တူညီသောအချက်များဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ ၇၆၀၇၃ ခုနှစ် Mighty Micros: Wolverine vs. Magneto မှကျွန်ုပ်တို့ min-figure ပုံစံတွင်မတွေ့ရသေးသော X-Men ဇာတ်ကောင်ရှိနေခြင်းသည်ပုံနှိပ်ပုံစံမဟုတ်ပါ။ 2017 ရဲ့ 76073 Wolverine ရဲ့ Chopper Showdown ကတည်းကအိတ်ပေါ်မှာ။
ထိုသတ်မှတ်ထားသောအမည်များသည်သင့်အားမသဲကွဲပါက Wolverine နှင့်ပတ်သက်ပြီးသူ၏စကားမပြောရလောက်အောင်အသေးစိတ်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကောင်၏မျက်နှာဖုံးတပ်ထားသောဗားရှင်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၏ 2014 X-Men vs. The Sentinel တွင်ပေါ်လာသည်၊ သို့သော်လွန်ခဲ့သောခုနစ်နှစ်ကပင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်ပြောင်းထားသော Wolverine minifigure ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်သည်။
များအတွက်ထုပ်ပိုးလျှင် 71031 Marvel စတူဒီယို သွားရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ Wolverine သည် X-Men အာရုံစိုက်ထားသည့်ပိုကြီးသည့်အရာ၌ဖြစ်စေပေါ်ပေါက်သည်ဖြစ်စေ၊ Avengers set comics set သို့မဟုတ်အနာဂတ်တွင် - တီးတိုးပြောရရင်အနာဂတ် Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာအစုံ (ဒီတစ်ဖြစ်ပါတယ် Marvel စတူဒီယိုအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။
ယခုအချိန်တွင်သင်သည်သင်၏လက်ပေါ်မှာရနိုင်ပါလိမ့်မယ် 71031 Marvel စတူဒီယို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှလာမည့်လတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလေ့လာပါ။ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် ၁၂ ခုအနက်တစ်ခုအတွက်အလွန်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာရမည်ကိုကြားနာပါ Disney+ minifigures ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.
← LEGO သည် Vision ၏ဒီဇိုင်းကို 71031 တွင်ရှင်းပြသည် Marvel စုဆောင်းထားသော Minifigures စတူဒီယို
အဆိုပါ Lego Marvel Collectible Minifigures သည်အယူအဆမျှသာမဟုတ်ပါ art →